FJKM Ankadifotsy Levitikosy 13.1-28 : NY HABOKANA EO AMIN’NY OLONA / Mana isan'andro / Soratra Masina / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Levitikosy 13.1-28 : NY HABOKANA EO AMIN’NY OLONA11/03/2018 20:07
Maharikoriko ny habokana na vao miandoha (2-3), na efa mitatra (7), na mamontsina fotsy (10) na mangenahena (14). Toy izany koa, na inona na inona endrika sy halalin’ny fahotana dia halan’Andriamanitra satria masina Izy (I Petera 1.16).
Ny fivoaran’ny habokana. Tsy tonga tampoka ny habokana fa nisy fiandohany toa fery kely tsy hita akory, mihombo, mitatra manenika ny vatana manontolo. Nanome vahaolana ho an’ny Zanak’Israely Andriamanitra dia ny fanatonana ny mpisorona raha vao manomboka misy famantarana. Toy izany ny fahotana eo amin’ny fiainan’ny olona : manomboka amin’ny fakam-panahy toa tsy mampaninona, kolokoloina iny dia lasa filàna, ary hy filàna torontoronina miteraka ota, ny ota tanteraka miteraka fahafatesana (Jakoba 1.14-15). Dieny vao miandoha ny fakam-panahy, dieny tsy mbola tonga zavatra mamatotra sarotra ialàna, dia manatòna miresaka amin’ilay Mpisorona Lehibe indrindra sady Mpisolovava antsika eo anatrehan’ny Ray dia Jesoa Kristy Ilay Marina, avotra ho antsika (Hebreo 7.24-25, I Jaona 2.1-2).
Ny fihanaky ny habokana. Mifindra amin’izay manakaiky sy mifampikasoka aminy ny habokan’ny olona iray. «Izany dia tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray (Adama) ho amin’izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran’ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra» (Romana 5.12). Fa avy amin’olona iray koa, dia Jesoa Kristy, no andraisana ny fanamarinana sy ny fahasoavana be (5.15). Io Jesoa Kristy io no afaka manadio antsika ho afaka amin’izay mety ho habokana rehetra eo amin’ny fiainantsika (I Jaona 1.9).
Vavaka : « Jesoa ô ! Sasao madio aho mba ho afa-keloka. Ary diovy aho mba ho afa-pahotana »